अफगानिस्तानका पूर्वमन्त्री अहिले जर्मनीमा बेच्छन् पिज्जा! - Dainik Online Dainik Online
अफगानिस्तानका पूर्वमन्त्री अहिले जर्मनीमा बेच्छन् पिज्जा!
प्रकाशित मिति : १० भाद्र २०७८, बिहिबार ४ : ०२
अफगानिस्तानका एक पूर्वमन्त्री यतिबेला जर्मनीमा पिज्जा बेच्दै आफ्नो गुजारा गरिरहेको पाइएको छ। सैयद अहमद शाह सादात जो अफगानिस्तानको सूचना विभागका पूर्व कार्यवाहक मन्त्री थिए उनी यतिबेला जर्मनीमा देश छाडेर बसिरहेका हुन्। यतिबेला तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरिसकेको छ र त्यहाँका राष्ट्रपति असरफ गनी देश छाडेर यूएई पुगेका छन्। अन्य धेरै मन्त्रीहरुले पनि देश छाडेको बताइन्छ। तर सैयदले भने तालिबानले देश कब्जा गर्न अगाडि नै देश छाडेका थिए।
उनले गतवर्षको नोभेम्बरमा देश छाडेका थिए। झन्डै ८ महिना अफगानिस्तान सरकारमा मन्त्री रहेपछि उनी जर्मनी गएका हुन्। उनले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट दुई दुईवटा डिग्री हासिल गरेका छन्, २२ वर्षसम्म विश्वका ठूलठूला कम्पनीमा काम गरिसकेका छन्। हाल मन्त्री सैयदले पिज्जा बेच्ने काम गरेकोबारे समाचार जर्मन पत्रकार जोसा मानिया श्लेगलले सार्वजनिक गरेका हुन्। पत्रकार श्लेगलले उनलाई जर्मनीको लिपजिग सहरमा पिज्जा बेच्दै हिँडेका बेला भेटेका थिए। सैयदले आफू अफगानिस्तानको पूर्वमन्त्री भएको बताउँदा पनि पत्रकारले यो मानेका थिएनन्।
तर उनले निकै दिनसम्म सैयदबारे अध्ययन गरेपछि समाचार बनाएका हुन्। राष्ट्रपति असरफ गनीको समूहसँग आफ्नो मतभेद हुन थालेपछि आफूले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर जर्मनी आएको उनको भनाइ छ। हिन्दुस्तान टाइम्स
ट्वाइलेट बनाएको पैसा नदिएपछि ठेकेदारले यसरी भत्काए नयाँ शौचालय (भिडिओ)